Liverpool Oo Soo Celisay Xiisihii Ay U Qabtay Ousmane Dembele, Lacagta Yaabka Leh Ee Ay Ku Iibsan Karto & Shuruuda Ku Xidhan - Gool24.Net
Liverpool Oo Soo Celisay Xiisihii Ay U Qabtay Ousmane Dembele, Lacagta Yaabka Leh Ee Ay Ku Iibsan Karto & Shuruuda Ku Xidhan
Kooxda Liverpool ee uu hoggaaminayo tababare Jurgen Klopp ayaa lagu soo warramayaa inay isha ku hayso saxeexa garabka Barcelona ee Ousmane Dembele kaas oo loo badinayo inuu kooxdaas iskaga dhaqaaqi doono dhawaan.
Sida uu sheegayo wargeyska Mundo Deportivo oo ah midka warkan laga soo xiganayaa, Liverpool ayaa mudo dheer xiiso u qabtay inay gacanta kusoo dhigto Dembele waxaana ay haatan qiimaynayaan fursada ay dalab kaga gudbinayaan xagaaga.
Shuruuda kaliya ee ay Reds ku xidheen inay u dhaqaaqaan saxeexa Dembele ayaa ah inay marka hore ka qancaan weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner iyagoo kaliya haddii ay isaga waayaan uun dhinaca Dembele u jeedsan doona.
Werner oo ah ciyaaryahanka halka ugu sarreysa kaga jira liiska xiddigaha ay doonayso Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan 24 gool qalinka ugu soo duugay Leipzig kaddib 28 kulan oo Bundesliga ah oo uu u ciyaaray.
Si kastaba, Liverpool iyo Klopp ayaa haddii ay ka go’antahay inay la saxeexdaan Werner u baahan doona inay kahor 15-ka bisha June bixiyaan lacagta 50-ka ilaa 55-ka Milyan ee Pound ah ee heshiiskiisa lagu bur-burin karo.
Dhinaca kale Liverpool ayaa sanadkii 2017 doonaysay inay lasoo wareegto Dembele markii uu joogay Borussia Dortmund balse waxa uu doortay inuu u wareego dhinaca Barcelona.
Tababare Jurgen Klopp ayaa si weyn ula dhacsan taageere weyna u ah 23 sano jirka Barcelona waxaana suurogal ah inuu qaab ciyaareedka ugu wanaagsan kasoo saaro haddiiba uu Anfield kula saxeexdo.
Ugu dambayn, warbixino dhawaan soo baxay ayaa sheegaya in marka laga yimaado inay Barcelona 96 Milyan oo Pound kula saxeexatay Dembele ay kaliya 37 Milyan ku iibin karto suuqan soo socda kaddib dhaawacyada badan ee dib u dhaca ah ee haleelay.